Semalt Expert: 7 Ny Surefire SEO Essentials Ny U-Moet Weten Ho An'ny Seleccter Van Een CMS
Maro amin'ireo fampiharana an-tserasera no afaka mametraka tsara ny Content Management System (CMS) mba hampisy endrika amin'ny tranonkala iray misimisy ary tsy misy. Amin'ny fampiasana e-commerce amin'ny aterineto, dia omenao fialan-tsasatra ao amin'ny lisitry ny karazan-tsarimihina, izay mety hahazoanao antoka kokoa mba hahazoana ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Izany no antony nahatonga ireo orinasam-pifandraisana sy tranonkala ho an'ny Search Engine Optimization (SEO) mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny mpanjifa an-tserasera.
Raha ny marina, tsara tokoa ny SEO sy ny SMM dia mila manana rafitra fanaraha-maso tsara indrindra mba hahafantarana tsara ny asany. Ny fitaovana fitantanana votoaty dia manana tsara laza sy asa. Ny sasany amin'izy ireo dia manana fomba fiasa roa tsy misy fanampiana, izay mety hahazoana mivarotra ny fivarotana na ny boete ao amin'ny Google - technologies used in outsourcing solutions.
Raha mampiasa ny CMS ny fanapahan-kevitra, manaraka ny tatitra manaraka, avy amin'i Max Bell, ny Customer Success Manager of Semalt , dia voafetra.
Ny tranonkala dia mampiasa Google bots mba hitsikerana ny tranonkalanao sy hampiditra azy. Ity no zavatra hitan'ny mpamaky ao amin'ny tranonkala. It is important to know how to use h1 tags, page titles of the metabarism (optional: optimalize). Ity flexibility ity dia afaka manampy amin'ny fananana rafitra fanaraha-maso tsara rafitra.
2. Miantehitra amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo Alt
Ity boky ity dia manome ny fahalalana informatika momba ny sary hita maso.
3. Mampiasa mari-pahaizana
Ity teknolojia ity dia mamorona ny tranonkala. Ny fanavaozana ny volana Janoary dia fanehoan-kevitr'ilay tranonkala iray avy amin'ny orinasa izay nirotsaka an-tsarimihetsika ao amin'ny tranokala izay ahitana ny tranokalan'ny SERP. Ny CMS avy aminao dia tokony ho voamarikao fa ny code dia toy ny fiarovana amin'ny alàlan'ny pejy rehetra. Azo atao ny mamorona pejy, indrindra amin'ny finday avo lenta, izay mihodina amin'ny laodany.
Ny tena manan-danja dia ny handefa CMS iray izay nahatonga ny pejy tsy azo ampiasaina raha tsy tapitra ny tapakila manontolo ao amin'ny template. Ny fikolokoloana ny UX dia tokony hanana ny laharam-pahamehana. Ny sjablonen sasany dia mahatsikaritra kely ny fiovaovan'ny toetr'andro.
5. URL-structur mila ampiasaina
Raha te hanoratra ao amin'ny SEO ianao, dia mila asio marika ny tranonkalan'ny URL mba ho solon'ireo code margin. Amin'ny lafiny hafa dia maro ireo mpampiasa azy no tsy manana.
Ity olana ity dia mihazakazaka mihoatra noho ny hafainganam-pandehan'ny iray amin'ny rohy mankany amin'ny URL hafa. Raha toa ka misy safidy iray dia afaka mamaritra ireo karazan-tsafidy finday voatanisa ao amin'ny pejy iray misy ny lahatsoratra. Ny tranonkala iray dia mamorona tranonkala mivantana miaraka amin'ny pejin'ny doka. Ny fahadisoana dia mamela ny fahaleovantenan'ny pejy, ka ny fisoratana anarana ho an'ny fihenam-bidy dia nanjary latsaky ny fifaninanana. Raha ny tena izy dia ny kriziniana dia natao mba hialana tanteraka sy hikapoka ny dubbele rehetra. Misy fomba iray ahafahana miala ao amin'ny Content Management System, amin'ny alalan'ny 301 rafitra. Eritrereto hoe ny CMS no ampiasaina.
7. Add-ons, plugins en modules
Fanapariahana dia lafiny manan-danja amin'ny CMS rehetra. Azo ampiasaina ao amin'ny tranonkala SEO ny WordPress
Mba hampidinana ny orinasa an-tserasera, dia mila miezaka mafy ny hahazo ny gofony sy ny fifaninanana amin'ny fifaninanana. Ny fomba fiasa mba hanaovana izany dia ny fampiroboroboana ny varotra an-tserasera an-tserasera mba hampahafantarana ny pejy iray amin'ny tranonkala iray. SEO dia tetikady tsara indrindra mba hifanaraka. Ny olana dia mipetraka amin'ny Content Management Systems eo amin'ny toerana sy ny zavatra izay ilaina. Ampiasao tsara ny toro-làlana omena anao amin'ny fampiasana ny fomba fiasa manan-danja indrindra amin'ny fanoratana ao anatin'ny rafitra fanaraha-maso content.